iCare Data Recovery Standard v5.3 - .::just for share::.
Home » Data Recovery » iCare Data Recovery Standard v5.3
မင်္ဂလာပါဗျာ ဒီနေ.ကျွန်တော်တင်ပေးချင်တာလေးကတော့ သင့်ကွန်ပြူတာ ဖုန်း usb stick နဲ. ဟက်ဒစ်
တွေထဲက ဒေတာတွေကို မှားဖျက်မိ format ရိုက်မိလို. စိတ်ဆင်းရဲနေသူများအတွက် မိမိတို.အမြတ်တနိုး စုဆောင်းထားတာလေးတွေကို ပြန်လည်စုဆောင်းမယ်ဆိုရင် အချိန်ပေးရယုံတင်မကပဲ
အင်တာနက်လိုင်း မကောင်းတာကြောင့် စိတ်ဒုက္ခရောက်ရမှာပါ ဒီကောင်လေးကတော့ အဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေ ကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို. ပျောက်ဆုံးပျက်စီးသွားတာတွေကို ပြန်လည်ရယူပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ်ကလဲ 3MB လောက်ပဲရှိတာဆို တော့ လူတိုင်းဒေါင်းထားသင့်တဲ့ဆော့ဝဲလ်မျိုးပါ လူတိုင်းအမှားနဲ.မကင်းကြပေမဲ့ အမှားတစ်ချက်ကိုကြောင့် စိတ်မဆင်းရဲရဖို. ဒီဆော့ဝဲလ်လေးသာဆောင်ထားလိုက်ပါဗျာ အထဲမှာ key ဖိုင်လေးပါထည်.ပေးထားတာ ကြောင့် full version ရမှာဖြစ်ပါတယ် အသုံးပြုရတာလဲလွယ်ကူပြီး စွမ်းဆောင်မှုပိုင်းမှာပြောစရာမလို အောင်နာမည်ရပြီးသားဖြစ်တာကြောင့် လိုချင်သူများအောက်မှာသာဒေါင်းသွားလိုက်ပါ............